सक्रिय व्हीलचेयर - अल्ट्रा lightweigth व्हीलचेयर | Karman® प्रदर्शन
घर / म्यानुअल व्हीलचेयर / सक्रिय व्हीलचेयर
कुनै उत्पादन वजन१ .19.1 .१ एलबीएस वा कम19.1 पाउण्ड - 25 पाउण्ड25.1 पाउण्ड - 35 पाउण्ड50 एलबीएस वा अधिक
कुनै Legrest प्रकारस्थिरस्विंग अफहटाउन सकिने
सक्रिय व्हीलचेयर उच्चतम प्रदर्शन को माग गर्दछ
एस आकार आसन प्रणाली लाभ
हाम्रो सक्रिय व्हीलचेयर पैंतरेबाजी को लागी विशेष गरी सजिलो छ र खेल व्हीलचेयर को एक बहुमत कि बजार मा आज बाहिर छन् जस्तो देखिन्छ। यदि तपाइँ एक छिटो पुस्तक जीवन शैली बाँच्न र तपाइँ त्यो एक व्हीलचेयर को लागी खोजिरहनुभएको छ अल्ट्रा हल्का र aerodynamic, तब हाम्रो सक्रिय व्हीलचेयर सेक्सन पहिलो स्थान तपाइँ हेर्न चाहानुहुन्छ।
यदि तपाइँ एक सक्रिय व्हीलचेयर को जरूरत छ कि खेल र अन्य शारीरिक गतिविधिहरु को लागी आदर्श हो, हाम्रो सक्रिय व्हीलचेयर श्रृंखला सुविधाहरु एक हल्का फ्रेम डिजाइन र संरचना को लागी विशेष विवरण संग।
S-ERGO ATX श्रृंखला को विशेष सुविधाहरु सामेल छन् एक कठोर संरचित फ्रेम संग foldable छ कि संगै कम्प्याक्ट आयाम। यो पनि सीट उचाई समायोज्य, backrest समायोज्य, र धेरै धेरै छ। यो सही व्हीलचेयर हो जो कोही को लागी खेल को लागी ट्युन गरिएको चपलता को आनन्द लिन्छ र एक व्हीलचेयर को जरूरत छ कि आफ्नो जीवन शैली संग राख्न सक्छ।
हाम्रो पनि जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस् अल्ट्रालाइट तौल श्रेणी धेरै धेरै छनौटहरु संग यो तौल को श्रेणी मा आउँछ। साथै सबै को बारे मा जान्नुहोस् विकल्प र सामान कि जस्तै यो व्हीलचेयर संग कन्फिगर गर्न सकिन्छ Spinergy पाels्ग्रा® र भ्यागुतो खुट्टा निलम्बन ®। हाम्रो ERGO श्रृंखला व्हीलचेयर को केहि पनि विभिन्न विकल्पहरु मा जो सबै आफैं सक्रिय व्हीलचेयर कोटि र एक खेलकुद व्हीलचेयर को प्रकृति लाई चुनौती गर्न को लागी हुन सक्छ। विकल्पहरु धेरै छन् त्यसैले तपाइँको डीलर संग आज परामर्श गर्न निश्चित हुनुहोस्!
हाम्रो एस आकार आसन प्रणाली मानक म्यानुअल व्हीलचेयर सीट मा धेरै फाइदा प्रदान गर्दछ। न केवल दबाव खुट्टा र पछाडि अधिक समान रूपमा वितरित छ, यो पनि एक अधिक स्थिर बस्ने सतह प्रदान गर्दछ र अगाडि स्लिपेज रोक्छ।
संसारको पहिलो S- आकार ergonomic सीट विशेष गरी आराम र ergonomics को लागी विकसित गरीएको छ। २२ भन्दा बढी पेटेन्ट संग र एक ग्लोबल उत्पादन को रूप मा शुरू गरीयो, यो अद्वितीय उत्पादन दबाव मुक्त गर्न, स्लाइडिंग कम गर्न र राम्रो मुद्रा को बढावा दिन को लागी सक्षम छ।
हाम्रो S-ERGO फ्रेम को सबै क्र्यास परीक्षण गरीएको छ। यो चुनौती Ultralight वजन, Ergonomics, र दिमागमा सुरक्षा र एक अन्त उत्पादन सम्भव गुणस्तरीय को उच्चतम को लागी पट्टी सेट संग भेटिएको थियो। अधिक वैकल्पिक कुशन द्वारा उपचार जान्नुहोस् AEIGIS® एक प्रदान गर्दै विरोधी माइक्रोबियल लेपित बस्ने प्रणाली। सबै भन्दा राम्रो व्हीलचेयरहरु को लागी मात्र तपाइँको लागी बनाईएको हो किनकि तपाइँ यसको योग्य हुनुहुन्छ।
सही व्हीलचेयर खोज्दै लाई तपाइँ फिट धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसैले हामीले नयाँ सुरुवात गरेका छौं ईर्गो फिट उचित मा आधारित अभियान व्हीलचेयर Ergonomics, तुलना र विरोधाभास दुवै आफ्नो शरीर को आवश्यकता, तपाइँको व्हीलचेयर आयाम, र पनी वातावरण सन्तुलन छ जसमा तपाइँ तपाइँको व्हीलचेयर को आनन्द लिईरहनु भएको छ।
चाहे यो बाहिरी अभियान हो र यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि कम से कम प्रतिरोध को मात्रा संग एक र्‍याम्प मा जाँदै, वा लामो समय को उपयोग को कारण सकेसम्म सहज भएकोले, हाम्रो ईर्गो फिट पद्धति को एक अनगिन्ती मात्रा प्रदान गर्दछ विकल्प र सामान, वा विशिष्ट गतिशीलता संग गतिशीलता र आराम को लागी डिजाइन गरीएको मोडेल।
सक्रिय व्हीलचेयर को लागी एक अनुकूलित समाधान को लागी हेर्दै हुनुहुन्छ?
ATX मोडेल साँच्चै एक उन्नत कुर्सी हो कि न केवल गुरुत्वाकर्षण को एक केन्द्र परिवर्तन गर्ने सबै फाइदाहरु छन्, तर यो पनि उच्चतम प्रदर्शन क्षमताहरु को माग गर्दछ कि प्रयोगकर्ता को लागी पूर्वानुमान योग्य प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। प्रतियोगिता को लागी बनेको एक उच्च अन्त खेल बाइक जस्तै, यो श्रेणी मात्र सबै भन्दा राम्रो र केहि कम माग्छ। यो को लागी तपाइँको मापन थाहा छ र हाम्रो अर्डर फाराम भर्न को लागी हो। तपाइँ तपाइँको एटीपी वा चिकित्सा पेशेवर संग परामर्श लिन चाहानुहुन्छ मार्गदर्शन प्राप्त गर्न को लागी तपाइँ कुनै पूर्व-अवस्थित चिकित्सा शर्तहरु हुनु पर्छ। Karman मा, हामी म्यानुअल व्हीलचेयर को लागी छनौट गर्न को लागी १०० भन्दा बढी मोडेलहरु छन्। सामान्य मा, यदि तपाइँ आफैलाई एक व्हीलचेयर मा प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ सबैभन्दा हल्का सबैभन्दा सहज व्हीलचेयर उपलब्ध चाहानुहुन्छ। उपलब्ध सबै कोटिहरु को बारे मा अधिक जान्नुहोस् र त्यसपछि उत्पादन वजन र बजेट द्वारा छनौट गर्नुहोस्। यहाँ केहि श्रेणीहरु र तपाइँको समीक्षा को लागी जानकारी हो: